ပရိသတ်တွေ အမှန်အကန်သဘောကျနေတဲ့ Taylor Swift ရဲ့ Music Video အသစ် – ‘End Game’
On January 12, 2018 January 12, 2018 By Atsuko
Taylor Swift ရဲ့ MV အသစ် ‘End Game’ ဟာ ထွက်ရှိတာနာရီပိုင်းလေးပဲရှိသေးပေမယ့် လူတွေပါးစပ်ဖျားမှာ ရှယ်ရေပန်းစားနေပါပြီ။ သီချင်းကအရမ်းကောင်းလို့လား… အဲဒါကြောင့်လည်းပါပါတယ်။ ဒီ MV ဘာတွေကြောင့် နာမည်ကြီးနေရလည်းဆိုတာကို အောက်မှာပြောပြသွားပါမယ်။
Swift ရဲ့ ဒီသီချင်းကို Ed Sheeran နဲ့ Future တို့ကပါဝင်အားဖြည့်ပေးထားကြတဲ့အတွက် သီချင်းနားမထောင်ရသေးဘဲ အဲဒီနေရာမှာတင်တော်တော်လန်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ‘Sweeran’ fan တွေကတော့ ဒီတစ်ချက်တည်းနဲ့တင် ကြွေဆင်းသွားကြလောက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီ MV ထဲမှာ Swift မြူးမြူးကြွကြွကခုန်နေတာတွေကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။ Sheeran နဲ့အတူ ဘားထိုင်ရင်း မူးနေတဲ့ Swift ရဲ့အသွင်ကတော့ ဒီ MV ရဲ့ highlight ပါပဲ။
— Natt (@tayftswift) January 12, 2018
— Grace ?// 133 days Rep. Denver (@LghtOf1000stars) January 12, 2018
Ed X Taylor are the cutest#EndGameMusicVideo pic.twitter.com/jhtevZCwMS
— Anupama | Stream End Game MV (@BangtanSwift13) January 12, 2018
I lied. This is probably my new favorite gif. ? #EndGameMusicVideo pic.twitter.com/YGOTQST2Yf
— TayTay (@tayslayswift13) January 12, 2018
Swift ရဲ့ ‘End Game’ MV နာမည်ကြီးနေရတဲ့နောက်အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ကတော့ ဒီ MV ထဲမှာ မြှုပ်ထားတဲ့ easter eggs လေးတွေကြောင့်ပါ။ MV တစ်ခုလုံးမှာ Swift ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဂဏန်းဖြစ်တဲ့ နံပါတ် ၁၃ ကို ဟိုနားတစ်ကွက်၊ ဒီနားတစ်ကွက်ဖြန့်ကျဲထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး.. သူမရဲ့ hater တွေကို ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ ပမာမခန့်ပြန်လုပ်ပြလိုက်တဲ့တစ်ကွက်ကတော့ အရမ်းကိုအထာကျလွန်းပါတယ်။
“Taylor Swift isaSnake” ဆိုတာ သူမကို အပုပ်ချတဲ့အနေနဲ့အသုံးပြုတဲ့စကားပါ။ ဒါပေမယ့် သူမရဲ့ hater တွေကို ခပ်တည်တည်ပဲ ‘I don’t care!‘ ဆိုတဲ့အထာနဲ့ ဒီ MV တစ်ခုလုံးမှာ မြွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ easter eggs တွေထည့်ပြထားပါတယ်။ Swift ရဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ အဲဒီ snake reference တွေပါဝင်တယ်ဆိုတာသိတာနဲ့ MV ကို frame by frame ရပ်ပြီး အသေးစိတ်လိုက်ရှာ၊ ပြီးတော့ social media တွေပေါ်တင်ကြနဲ့ အပျော်ကြီးပျော်နေကြပါတယ်။ Well Done Swift!
lmao dying, people accused taylor swift of playing snake and she’s literally playing snake on her new video ? #endgamemusicvideo pic.twitter.com/XjzgGj5rQk
— Now I’m your DAISY (@Aeeek27) January 12, 2018
ကဲ.. ဒီက Swifties တွေလည်း ခေတ်နောက်ကျမကျန်ခဲ့ရလေအောင် ‘End Game’ MV ကို အပြေးသာလိုက်ကြည့်ပါလို့…
PREVIOUS POST Previous post: ၃၂ ကြိမ်မြောက် Golden Disc Awards မှာ ဆုရရှိသွားကြသူများ
NEXT POST Next post: ထွက်ရှိပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း iTunes မှာစံချိန်တွေတင်သွားခဲ့တဲ့ Camila Cabello ရဲ့ Debut Album – ‘Camila’